I-penthouse EYODWA ephakathi u. Umbono weWeser - I-Airbnb
I-penthouse EYODWA ephakathi u. Umbono weWeser
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarcel
Indlu yepenthouse ikwindawo esembindini, ezolileyo kwindawo ekufutshane nesixeko. Itholakala kwimbali yendlu kaGoliyati kwaye imbono evela kumgangatho we-5 yenza ukuhlala kwakho kuyingqayizivele. Kwelinye icala unombono othe ngqo wamanzi we-Weser kwaye kwelinye ujonge ngaphezulu kweBremen skyline.
I-elevator ikusa ngqo kwigumbi lokuhlala. Uhambo lomzuzu lukusa kwiHansa Carré. Imall enazo zonke iivenkile eziyimfuneko.
Yonke le ndlu iye yalungiswa yakumgangatho ophakamileyo. Impahla yanamhlanje kunye ne-chic ngokudibanisa nombono yenza ukuba ifulethi ibe yodwa. Awekho amanye amagumbi kwisakhiwo sembali, ngoko unoxolo olupheleleyo kunye nokuzola.
Kwi-terrace ebanzi unokuphumla emva kosuku olunzima.
Igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo nalo lisanda kulungiswa kwaye lihlaziywa, ukuze ungasweli nto.
Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo- iWiFi, iitawuli, ilinen yebhedi zonke zibandakanyiwe.
4.74 · Izimvo eziyi-31
Akukho bamelwane, ngoko ke uxolo olungenamiqathango luqinisekisiwe.
Ukuba ufuna ukuphumla, igumbi lokuhlala liyindawo yokubalekela kunye nenzolo epholileyo kwindawo engqongileyo yendalo. Ukuba ujonge ukuphila, ukuphithizela, amathuba okuthenga, unokuba sembindini wesixeko, iBala Lemidlalo iWeser okanye iOsterdeich kwimizuzu nje embalwa.
Iimitha ezingama-50 kude nendlu uya kufumana i-Edeka yokuqala kwaye ke iyindawo yokuqala yokuthenga.
Iivenkile zokutyela ezininzi ezineendlela ezahlukeneyo zokutya zinokufumaneka esitratweni (isiTaliyane, isiGrike, njl.
Uqhagamshelo lwezothutho olulunge kakhulu kunye noqhagamshelo kwizithuthi zikawonke-wonke lujikeleza kwindawo ephezulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Marcel
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bremen